Ny sary voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 3 dia voasivana | Androidsis
Na eo aza ny mety ho izy, ilay mpanamboatra Aziatika Xiaomi, dia tonga andinin-tsoratra masina saika isaky ny sehatra kasainy, noho ny kalitaon'ny vokariny ihany, fa noho ny vidiny mahafinaritra mahatratra ny tsena ihany koa. Ohatra vitsivitsy no hita ao amin'ny finday avo lenta izay kasainy aseho, ny scooter elektrika, ny mpanadio vacuum robot ary ny fehin-tànana mi Band 2 miisa.
Niresaka nandritra ny herinandro maromaro momba ny tsaho izahay, efa fahita matetika, momba ny fanavaozana ny Xiaomi Mi Band 2, fehin-tànana hamaritana azy io izay namela ny orinasa aziatika ho tonga ny mpivarotra fehin-tànana lehibe indrindra amin'ity karazana ity, mihoatra lavitra noho ny Fitbit mahery rehetra, mpanamboatra toa tsy mahalala izay ilain'ny mpampiasa azy.
Raha manana Mi Band 2 ianao dia ho afaka hahita, raha ny vidiny ahitantsika azy, manodidina ny 25 euro dia fitaovana mahafinaritra ho an'ny refeso ny asantsika isan'andro, ankoatry ny famelana antsika hanoratra ny asanay mandritra ny torimaso sy handrefesana ny fihomboantsika. Betsaka ny tsy nangatahina. Eny eny, mivoaka ny taranaka fahatelo. Iray volana latsaka lasa izay dia namoaka sary tsy nisy antsipirihany momba ilay ho lasa andiany fahatelo amin'ny Mi Band ilay mpanamboatra.
Misaotra an'ireo bandy ao amin'ny iGeekPhone, efa navoakan'ny sary voalohany ilay antsoina hoe Mi Band 3. Ny tena mahavariana momba izay ho taranaka fahatelo dia ny efijery, izay manome vaovao betsaka kokoa noho ny tamin'ny lasa. Mikasika ny famolavolana dia hitantsika ny fomba itovizany amin'ny Mi Band 2, na dia toa nanjavona aza ny bokotra fikasihan'ny taranaka faharoa, bokotra iray izay manome antsika fikitika sy valiny mahafinaritra. Antenaina fa ny fanoloana an'ity bokotra fikitika ity dia mitovy na tsara kokoa noho ilay ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny sary voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 3 dia voasivana
Xiaomi dia manamafy fa tsy hisy Xiaomi Mi 7
LG handefa ny LG V35, Q7, Q7 Plus, X5 ary X2 amin'ny volana Jona